Simuka Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka simuka
Pane kudaro zvakawanda kuona, kuziva, kuda, kunakidzwa. Pane chaizvoizvo zviri zvikuru havagoni kuderedzwa kuti mafaro. Mazwi okuti "kunakidza" "kuputika" "bhora" "pati" anonzwika seupenzi mu…
The chete nguva I…
Ndaiva nemakore gumi namashanu okuberekwa uye upenyu hwangu hwakanga ndatendeuka mukati panze. zita rangu uye chitarisiko haana kushanduka, asi zvose pamusoro pangu wakange. Ndaiva yakasiyana zvachose munhu kupfuura ndakanga ndiri gore kana maviri asati. Handisi kureva apo vanhu kuenda kukoreji uye kusikazve pachavo pamwe nicknames itsva uye unhu hwakafanana; Ndinoreva chinhu chinokosha akanga aenda pasi mukati kwandiri. Ndakanga kuva muKristu. Ndainzwa itsva. Ndainzwa mupenyu.
Ndakanzwa zvakanaka kuti ndaifanira kuzivisa kuti munhu aizoteerera, kunyanya shamwari yangu yepedyo uye mhuri. Munhu wese akagamuchira zvakasiyana kuchinja mandiri-vamwe nomufaro, vamwe kurwisa-asi chete kukurukura nguva dzose akamira kwandiri.
Ndakanga ndichitaura munhu akura wandakanga vanoremekedzwa zvikuru, chaizvo kutsanangura mutambo wangu hurongwa zvokukudza Mwari pamwe mararamiro angu, zvakananga kwangu zvepabonde kuchena. Ndakaedza kudzikama nezvazvo, asi zvakanga nguva dzose zvakaoma kubata kufara kwangu. Sezvo mashoko leapt kubva rurimi rwangu pagungano tyisa kumhanya, Ndine pakuti akanga asina sezvo kufara sezvo ndakanga. Aiedza kudaro…
Mubhuku rino simba, Trip Lee anoti inguva muka uye SIMUKAI, kurarama nzira takasikwa kuti tirarame. Young kana akwegura, tanga vakadanwa kurarama iye. Rudyi…
mu 2012, Ndakazvizivisa ndingada kuti vave "achipindira kure mumhanzi." Hungu, Ndinoziva kuti zvinoita mudyandigere-ish, asi ini nemaune haana kushandisa shoko kuti. Ndakaramba naro nemaune kujeka nokuti handina 100% chokwadi zvazvaizoita…